श्रीमतीलाई उपहार : चन्द्रमामा २३ रोपनी जग्गा ! « नारी खबर >
श्रीमतीलाई उपहार : चन्द्रमामा २३ रोपनी जग्गा !
पुष १४, २०७७ मंगलबार
‘तिमिलाई पाए आकाशको तारा झारीदिउँला’ भनेर प्रेमीकालाई प्रलोभन देखाउने कुरा सपनाको कुरा मात्र हो । यो सपना देखाउने कुरा निकै पुरानो भइसक्यो ।
तर भर्खरै भारतको राजस्थानस्थित अजमेर जिल्लाका व्यापारी धर्मेन्द्र अनिजाले आफ्नी श्रीमतीका लागि चन्द्रममामा जग्गा किनेर उपहार दिएका छन् । त्यो पनि एउटा घडेरी मात्र होइन, २३ रोपनी ।